China Soft PVC Key Covers orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | SJJ
Ny fonosana fanalahidy malefaka PVC dia antsoina koa hoe cap key, singa fampiroboroboana tonga lafatra, tsy vitan'ny hoe afaka handravaka ny lakilanao, fa koa hampiroborobo ny orinasanao na ny orinasanao.
Malemy Sarona fanalahidy PVCdia entana mahafinaritra hiarovana ny lakilanao ary hanehoana ireo marikao sy ny manampahaizana manokana. Ny fonosana fanalahidy PVC malefaka dia vita amin'ny akora malefaka PVC, miaraka amina famolavolana maty hahatratra endrika sy logo maromaro. Ny lakilanao am-baravarana, fiara, tranga ary sns izay namboarina tamin'ny metaly dia mety ho mora ampidirina am-bovoka, hametrahana SoftSarona fanalahidy PVCafaka miaro sy misoroka ny fanalahidy hampidinina oksizenina, izany dia mitazona ny lakile ho vaovao sy mamiratra. Ny fametrahana fametahana hafa toy ny jiro misy bateria ao anatin'ny ampahany malemy dia azo ampiasaina ho fanilo. Ny endrika samihafa amin'ny fonony manan-danja dia afaka mampiseho ny toetra mampiavaka anao, hanehoana ireo marika manokana anananao manokana. Ny habe kely ho an'ny fonosana Soft PVC Key dia mety hitazonana na hitondra na aiza na aiza. Ny fitaovana dia sariaka ary tsy misy poizina ho an'ny tontolo iainana, afaka mandalo ny fenitra fitsapana an'i Etazonia na Eoropeana. Ny loko PMS rehetra dia misy, ny loko marobe dia azo tratrarina amin'ny zavatra iray ihany. Ny antsipiriany dia azo aseho arakaraka ny volavolanao.
Safidy fametahana mahazatra: peratra mitsambikina, peratra fanalahidy, Rohy vy, kofehy, rojo baolina, jiro, bateria sns.
Teo aloha: Filalaovana keychain PVC malefaka
Manaraka: Mpanokatra tavoahangy PVC malefaka
fonony fonony fanalahidy
fonony fanalahidy amidy
Sarona fanalahidy PVC
fonosana lakile fingotra